(၂၇၉)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းထီဖွင့်ပွဲတွင် အက္ခရာ တစ်လုံးထပ်မံတိုးမြှင့်သွားမည် ~ Myanmar Express
(၂၇၉)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းထီဖွင့်ပွဲတွင် အက္ခရာ တစ်လုံးထပ်မံတိုးမြှင့်သွားမည်
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဌာနခွဲမှ ထုတ်ပြန် ချက်အရ လာမယ့် ၂၀၁၂ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ရက်နေ့မှာ ဖွင့်လှစ်မယ့် ၂၇၉ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းထီဖွင့်ပွဲမှာ နောက်ထပ် အက္ခရာ တစ်လုံး ထပ်မံတိုးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ၂၇၆ကြိမ်မြောက် ထီဖွင့်ပွဲမှာတော့ အက္ခရာ ၂၅လုံး အဖြစ် က အက္ခရာမှ မ အက္ခရာအထိသာ ဖွင့်လှစ် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဇန်န၀ါရီလ နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ထီဖွင့်ပွဲတွေမှာတော့ အက္ခရာ ၂၈လုံးအဖြစ် က အက္ခရာမှ လ အက္ခရာအထိ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပေမယ့် လာမယ့် ၂၇၉ကြိမ်မြောက် ထီဖွင့်ပွဲမှာတော့ အက်ရာ ၂၉လုံးအဖြစ် က အက္ခရာမှ ၀ အက္ခရာအထိ ထပ်မံတိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုလို အက္ခရာတွေ ထပ်မံတိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဟာ လက်ရှိထီဈေးကွက်မှာ ထီထိုးသူ များလာတဲ့အတွက် ထပ်မံတိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ရတာဖြစ် တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုလိုလာမယ့် ၂၇၉ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းထီဖွင့်ပွဲမှာ အက္ခရာတစ်လုံး ထပ်မံတိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ် သလို ဆုကြေးအရေအတွက် များလည်း ထပ်မံတိုးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသူ၊ကျောင...
မာဒီစီးဘန့်ဇ် ကိုယ်ပျောက် မော်တော်ယာဉ်လာပြီ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ လုံးဝအနားယူသွားပြီဟု သမ္မ...
Viper ဆော့ဝဲကို အသုံးပြု၍ ပြည်ပသို့ ဖုန်းအခမဲ့ ခေါ်...
သတိမပြုမိတာလား မပြုတာလား (ပေးစာ - ၁၁၃)
ဥပေဒအရ ကြိုတင်မဲ ပေးခွင့်ရှိသူမှအပ အခြား မဲဆန္ဒရှင်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စည်းရုံးရေး ကာလအတွင်း ဆွဲကြိုးခ...
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ကြီး ညာတယ် (၂)
ရွှေတိဂုံစေတီတော် နှစ်၂၆၀၀ပြည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယ ပွဲတော်၌...
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦး ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရတြာ ဆေးမင်ကြောင် (သို့မဟု...
မြန်မာ နိုင်ငံစာပေနဲ့စာနယ်ဇင်းအဖွဲု့ဖျက်သိမ်းတော့...
စည်းကမ်းဟူသည် လူ့တန်ဖိုး။ စည်းကမ်းမရှိ NLD = တန်ဖိ...
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များ ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်တိုးရန် အတ...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဌေးကြွယ်နဲ့ NLD ...
မတ်လ ၆ရက်နေ့မှစတင်ကာ အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက် လ...
အအေးဒဏ် ခံနိုင်သည့် ကျည်ဆန် ရထားကို တရုတ် တီထွင်နေ...
မဲရုံအတွင်း ဗီဒီယိုနှင့် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးခွင့် ရမည...
ဘာလင်ခရီးသွားပြပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီ ၃၀ ခ...
ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး
ဗုဒ္ဓ = ဟာသ ?
မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်အတွင်းမှ လေကြောင်းဖြတ်သန်းခ ၂...
ကျပ်ငွေ ၁၃၂၄ ဘီလီယံကျော်ကို နောက်ထပ် ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသ...
ပြည်ပနိုင်ငံသားခံ မြန်မာများ မြန်မာနိုင်ငံသားများအ...
လှည်းတန်းခုံးကျော် တံတားကို ၄လမ်းမောင်းစနစ်ဖြင့် တ...
အစိုးရဆေးရုံများအတွက် ဆော်ဒီမှ 'ကန်'ဒေါ်လာသန်း ၂၀ေ...
ကမ္ဘာကျော် GEဂျက်လေယာဉ်နှင့် တာဘိုင်လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ ...
ဘဏ် ၁၉ ဘဏ်တွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် MPU ကတ် ဧပြီတွင် ...
အမေရိကန်တွင် လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွား...
ဘက်ပေါင်းစုံ ဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ပါတီဝင်များ မြန်မာ့မြိ...
ပိုလန်တွင် ရထားတိုက်မှု လူ ၁၅ ဦး သေဆုံး
ကိုရီးယားလေကြောင်း လိုင်းတစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံသို့ ...
ဧရာဝတီအထူး စီးပွားရေးဇုန်နှင့် စီမံကိန်းမျိုးစုံအတ...
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ အင်တာနက် ထိန်းချုပ် မှုများ ပြုလုပ်ေ...
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ကြီး ညာတယ် (၁)
ပြည်ပ ၀ယ်လိုအားမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ရာဘာဈေးမြင်...
ကြားဖြတ်သည် လွတ်လပ်မျှတလိမ့် မည်ဟုNDFဆို
ကေအိုင်အိုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ ထပ်မ...
(၂၇၉)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းထီဖွင့်ပွဲတွင် အက္ခ...
ဘုရားသားတော်များနှင်. NLD (အပိုင်း-၂)
၁၁ ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ထိုင်း လူကုန်ကူးမှု ဆိုင်ရာေ...